Guam cirku wuxuu ku iftiimin doonaa rashka & iftiinka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Guam » Guam cirku wuxuu ku iftiimin doonaa rashka & iftiinka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Guam • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Xafiiska booqdayaasha Guam
Toddobaatan iyo toddobo sano ka hor, jasiiradda Guam waxay ka sara martay burburkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Isagoo ka fekeraya xoogga iyo adkeysiga ay muujiyeen odayaasha Guam, Gov. Lou Leon Guerrero iyo Golaha Mayors ee Guam ayaa ugu magac daray dabaaldega sanadkan Guam's Liberation, 'Kontra i Piligru, Ta Fanachu.' Macnaheedu waa "khatarta oo dhan, waan ka kici doonnaa."
Xuska sanadguuradii 77aad ee Guam Xorriyaddiisa, Xafiiska Guddoomiyaha iyo Xafiiska Guam ee Guam (GVB) wuxuu soo bandhigi doonaa Guam showgiisa ugu horreeya ee iftiinka elektaroonigga ah, oo ay ku jiraan 100 quadcopter drones, oo imanaya fiidkan Maalinta Xorriyadda, Arbacada, Julaay 21, 2021.
Maalinta Xorriyadda ee loo yaqaan 'Drone Light Show' ayaa waxaa xigi doona saddex bandhig oo rashka isku mar ah.
Xafiiska Badhasaabka iyo GVB waxay la shaqaynayeen iibiyeyaasha maxalliga ah Bella Wings Aviation iyo JamzMedia Productions / ShowPro Pyrotechnics si ay u keenaan waxyaabahan xiisaha leh ee loogu talagalay xafladaha sannadkan ee Xorriyadda.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan soo bandhigno madadaalo noocan oo kale ah, waxaan rajeyneynaa inay u adeegto sidii dhiirigalin joogto ah oo ku wajahan mustaqbal xoog leh, barwaaqo u leh jasiiradeena iyo dadkeenna," ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Lou Leon Guerrero. "Marka aan xusno jasiiraddeenii 77-aad ee laga xoreeyay gumeystihii shisheeye, dabaaldegyadu waxay sii qoto dheereeyeen macno ahaan iyadoo caqabadihii midkeen kasta u adkaystay ee ka dhashay Cudurka faafa ee COVID-19."
“Badhasaab Lou iyo waxaan u mahadnaqaynaa dadka Guam ee sii joogaya wadiiqada iyo mar labaad, annaga oo caddaynaya adkaysiga bulshadayada jasiiradeena ah xilliyada dhibaatooyinka. In kasta oo damaashaadka xorriyadda ay u muuqdaan kuwo ka duwan sanadihii la soo dhaafay, haddana waxaan rajeyneynaa inaan ku iftiiminno cirka habeenka wax ka badan rashka, laakiin Guam ayaa markii ugu horreysay muujisay diyaarad aan duuliye wadin, ”ayuu raaciyay Lt. Governor Tenorio.
Bandhigga Maalinta Xorriyadda ee loo yaqaan 'Drone Light Show' wuxuu bilaabmayaa 8:00 fiidnimo ee Arbacada, 21-ka July Diyaaradaha aan duuliye laheyn ayaa yaabi doona, qoob-ka-ciyaaraya, waxayna ku dul wareegi doonaan qaab-dhismeedka dusha sare ee Tumon Bay muddo 13 daqiiqo ah waxaana laga arki karaa dhowr mayl fog. Guddoomiyaha Gobolka Joseph Flores Memorial (Ypao Beach) Park ee ku yaal Tumon ayaa loo xiri doonaa dadweynaha habeenkaas, laakiin show light light show ayaa laga arki karaa meel kasta oo ka mid ah Tumon Bay.
Bandhigga diyaaradaha aan duuliyaha wadin waxaa xigi doona seddex rash oo la iswaafajiyay oo laga bilaabay Oka Point (isbitaal hore), Hagåtña Boat Basin, iyo markab laga soo raaco Malesso 'Pier 8:15 pm fiidnimo. on The Breeze 93.9 FM.
Haddii aad seegto bandhigga ugu horreeya ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaad ka qaban kartaa show kale tuulada Malesso 'Khamiista, Luulyo 22keeda 8:00 fiidnimo Wax rash ah lama soo bandhigi doono habeenkaas. Bandhigga soosocda wuxuu wajihi doonaa buurta Malesso dhanka Mount Schroeder waxaana laga arki doonaa qeybo ka mid ah Malesso 'iyo Humåtak.
“Haddii aynaan u dabaaldegi karin Maalinta Xorriyadda kulanno ay isugu yimaadaan kumanaan dadkeenna ah sida aan caadada u nahay oo kale, markaa waa inaan cirka la dhigno fariimaha midnimada iyo rajada qoysaskeenna xilli dhammaan bulshadayadu ay wada shaqeynayaan in laga adkaado virus-kan mar iyo dhammaanba, ”ayuu yiri Madaxweynaha GVB iyo CEO Carl TC Gutierrez.
Warar dheeri ah eTN oo ku saabsan Guam